Indlu yeeNdwendwe eCanyon Lake - I-Airbnb
Indlu yeeNdwendwe eCanyon Lake
Indlu engasemva yonke sinombuki zindwendwe onguBryan
Buyela kwindalo ngale ndlu ikhethekileyo yeTiny Lake. Ifakwe imayile enye ukusuka eCanyon Lake, kunye neekhilomitha ezisi-8 ukuya eGuadalupe River iyenza ibe yeyona ndawo ifanelekileyo yokubaleka ngempelaveki. Yonwabela indawo ephezulu ebanzi enebhedi enkulu yokumkanikazi kunye nebhafu yobungakanani obugcweleyo. Emva koko uphume kwipatio yakho ukuze uphume, jonga ukutshona kwelanga okanye utsibe kwibhafu eshushu ukuze uphumle.
Ibhedi enkulu yaseQueen ∙ Ibhafu enkulu ∙ IPatio ephangaleleyo ∙ Indawo Yokutyela ∙ Ibhafu eshushu (8am-10pm) ∙ Indawo Yokupakisha Isikhephe ∙ Indawo yomlilo ∙ ILake Labucala • Izilwanyana Zasekhaya Zamkelwe Kwi-Owners Discretion/Imvume
Umgqomo omncinci wekhaya ugcwele iTV, iFiber Optic WIFI, iAmazon Firestick enePrime, isofa yokulala, igumbi lokuhlambela eligcweleyo elineshawa, isinki kunye nendlu yangasese. Igumbi eliphezulu eliphezulu elinesilingi eyi-6 ft kunye nebhedi yokumkanikazi. Indawo yangaphandle ibandakanya idekhi ye-10x10ft, i-grill yombane, i-tub eshushu ekwabelwana ngayo, isangqa ekwabelwana ngaso somgodi womlilo wepropane kunye nendawo yokuhlala yabucala yokufikelela kwichibi (i-.5 yeemayile ukunyuka), isilwanyana esinobuhlobo kunye nokuvunywa kwangaphambili (i-$ 25 ngesilwanyana ngasinye, max 2)
***Le yindlu yeeNdwendwe encinci eyi-180 sq.ft***
Kwakhona, nceda uqaphele le GUESTHOUSE. Oku kuthetha ukuba uya kuba kwipropathi esecaleni kwendlu enkulu.
Ngaba ufuna igumbi elingakumbi? Jonga olunye uluhlu lwethu:
4.78 out of 5 stars from 426 reviews
4.78 · Izimvo eziyi-426
Bonisa iingxelo zokuhlola eziyi426
Unxweme lwaseLake uGqr. ubanga i-North Shore ye-Canyon Lake. Iirempu zamaphenyane zikumgama nje wemizuzu emi-5 ukuqhuba zombini iindlela endleleni. Okanye uhambo olufutshane ukusuka kwindlu yeendwendwe ukuya kwimibono yechibi.
Ndithumele nje umyalezo nge-AIRBNB, kwaye ndiza kulungisa nayiphi na ingxaki ukwenza ukuhlala kwakho kukhululeke kangangoko.